USORO PROTOCOL NETWỌK WINDOWS 10 ADỊGHỊ EFU - WINDOWS - 2019
Usoro protocol netwọk Windows 10 adịghị efu
Ọ bụrụ na ị na-agbalị ịchọpụta nsogbu mgbe Internet ma ọ bụ netwọk mpaghara adịghị arụ ọrụ na Windows 10, ị nwetara ozi na otu ma ọ bụ karịa netwọk netwọk na-efu na kọmputa a, ntụziaka dị n'okpuru na-atụ aro ọtụtụ ụzọ isi dozie nsogbu ahụ, otu n'ime nke m nwere olileanya ga-enyere gị aka.
Otú ọ dị, tupu ịmalite, akwadoro m ịgbapụ ma jikọta eriri USB na kọntaktị PC na (ma ọ bụ) na router (gụnyere ime otu ihe ahụ na WAN cable na router ma ọ bụrụ na ị nwere njikọ Wi-Fi), dịka ọ na-eme na nsogbu nke "mgbagwoju ogugu netwọk efu" bu nke eriri netwọk ejikọrọ adighi.
Rịba ama: ọ bụrụ na i nwere enyo na nsogbu ahụ pụtara mgbe ịchọrọ nrụnye mmelite nke ndị ọkwọ ụgbọala nke netwọk ma ọ bụ ekwe ntị wireless, gee ntị na isiokwu Ịntanetị adịghị arụ ọrụ na Windows 10 na Wi-Fi njikọ adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-ejedebe na Windows 10.
Tọgharịa TCP / IP na Winsock
Ihe mbụ ị ga-agbalị bụ ma ọ bụrụ na nsogbu ntanetị na-ede na otu ma ọ bụ karịa nke protocols netwọk Windows 10 adịghị - tọgharịa WinSock na TCP / IP.
Ọ dị mfe ime nke a: na-agba ọsọ ọsọ ọsọ dị ka onye nchịkwa (pịa aka bọtịnụ Malite, họrọ ihe menu ịchọrọ) ma pịnye iwu abụọ na - esonụ (ịpị Tinye mgbe ọ bụla):
Mgbe ịmechara iwu ndị a, maliteghachi kọmputa ma chọpụta ma edoziwo nsogbu ahụ: yana nnukwu ihe ịga nke ọma, ọ gaghị enwe nsogbu na usoro netwọk na-efu.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ nke mbụ nke iwu ndị a, ị na-ahụ ozi na-anabataghị ohere gị, wee mepee Editor Registry (Nweta R igodo, tinye regedit), gaa na ngalaba (nchekwa dị n'aka ekpe) HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Nchịkwa eb004a00-9b1a-11d4-9123-0050047759bc} 26 na pịa aka nri na mpaghara a, họta "Ikikere". Nye "otu onye" ohere zuru ezu iji gbanwee ngalaba a, wee mezie iwu ahụ ọzọ (ma echefula ịmalitegharịa kọmputa mgbe nke ahụ gasịrị).
Ụzọ ọzọ iji dozie njikọ na nsogbu Ịntanetị n'ọnọdụ a nke na-arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị Windows 10 bụ iji gbanyụọ NetBIOS maka njikọ netwọk.
Gbalịa mee ihe ndị a:
Pịa igodo Win + R na keyboard (igodo Win bụ nke nwere Windows logo) ma pịnye ncpa.cpl wee pịa OK ma ọ bụ Tinye.
Right-click na njikọ Ịntanetị (site na LAN ma ọ bụ Wi-Fi), họrọ "Njirimara".
N'ihe ndepụta nke usoro mgbagwoju anya, họta IP version 4 (TCP / IPv4) ma pịa bọtịnụ "Njirimara" n'okpuru (n'otu oge ahụ, site na ụzọ, lee ma ọ bụrụ na akwadoro usoro a, ga-enyere ya aka).
Na ala nke window windo, pịa "Di elu."
Mepee WINS tab ma debe "Disable NetBIOS na TCP / IP".
Tinye ntọala ị mere ma malitegharịa kọmputa, wee chọpụta ma njikọ ahụ ọ ga-arụ ọrụ dịka o kwesịrị.
Mmemme ndị na-eme ka njehie na usoro netwọk nke Windows 10
Enwere ike ịme nsogbu dị otú ahụ site na mmemme ndị ọzọ na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na iji njikọ netwọk (afụba, ikepụta ngwaọrụ netwọk, wdg.) Na ụfọdụ ụzọ aghụghọ.
N'etiti ndị ahụ hụrụ na-eme ka nsogbu ahụ akọwapụtara - LG Smart Share, ma ọ nwere ike ịbụ usoro mmemme ndị ọzọ, yana igwe arụmọrụ, emulators Android na ngwanrọ yiri nke ahụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ dịbeghị anya na Windows 10 ihe gbanwere n'akụkụ nke antivirus ma ọ bụ firewall, nke a nwekwara ike ịkpata nsogbu, lelee.
Ụzọ ndị ọzọ iji dozie nsogbu ahụ
Nke mbụ, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na mberede (ya bụ, ihe niile na-arụ ọrụ n'ihu, ma ị debeghị usoro ahụ), Windows 10 isi ihe ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, nsogbu kachasịsịsị na nsogbu na netwọk netwọk (ma ọ bụrụ na ụzọ ndị a kọwara n'elu adịghị enyere aka) bụ ndị ọkwọ ụgbọala na-ezighi ezi na nkwụnye ihe nkesa (Ethernet ma ọ bụ Wi-Fi). N'okwu a, na njikwa ngwaọrụ, ị ka ga-ahụ na "ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke ọma", ọ dịghịkwa mkpa ka onye ọkwọ ụgbọala mee ka ọ dị ọhụrụ.
Dịka iwu, ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala rollback enyere aka (na njikwa ngwaọrụ - pịa bọtịnụ na ngwa - ihe onwunwe, bọtịnụ "tụgharịa azụ" na "ọkwọ ụgbọala", ma ọ bụ ntinye mmanye nke onye ọkwọ ụgbọala "agadi" nke laptọọpụ ma ọ bụ onye na-arụpụta nne. nke a na-ekwu na mmalite nke isiokwu a.